ဆေးကုသ ဖို့ သိန်းသုံးရာ ကူညီမှု ရရှိလိုက်တဲ့ စိုင်းဆိုင်မောဝ်
April 12, 2018 By Buzz Myanmar News in အနုပညာ Tags: စိုင်းဆိုင်မောဝ်, မိသားစု, သိန်းသုံးရာ
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဇနီးမောင်နှံ က လှူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်ဆေးကုသမှု ခံယူနေရတဲ့ အဆိုတော်ကြီး စိုင်းဆိုင်မောဝ်အတွက် ဆေးကုသဖို့ အတွက် မြန်မာငွေကျပ် သိန်းသုံးရာ တိတိ ကူညီမှု ရရှိလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယင်းကူညီမှုကို စင်ကာပူ နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ ဦးကိုကိုထူးနဲ့ဇနီးဒေါ်စန္ဒာအောင်တို့ မိသားစုကနေ လှူဒန်းခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒါအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုင်းဆိုင်မောဝ် ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ် မှာ ယခုလို ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
“စင်္ကာပူနိုင်ငံနေ ဦးကိုကိုထူးနှင့်ဇနီးဒေါ်စန္ဒာအောင်သား မင်းသီဟထူးသမီး မဆုသီရိထူး မိသားစုတို့မှ တေးသံရှင်စိုင်းဆိုင်မောဝ် အားကျမ်းမာရေးကုသရန်အတွက် မြန်မာငွေ သိန်းသုံးရာကျပ်ကို ကိုကျော်ကျော်မိုး ကိုမြတ်သူတို့မှတဆင့် အိမ်တိုင်ရာ ရောက်လာရောက် ကူညီပေးအပ်သွားပါသည်.ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါကြောင်းနတ်လူသာဓုခေါ်စေသောဝ်…ထိုငွေများကိုစိုင်းဆိုင်မောဝ် ကျောက်ကပ်ရောဂါအား မှန်ပြောင်းအသုံးပြုလေဆာဖြင့် ကုသသည့်နည်းဖြင့် အမြန်ဆုံးကုသမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပရိတ်သတ်များအား အသိပေးအပ်ပါသည်. စိုင်းဆိုင်မောဝ် မိသားစု” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
အဆိုတော်ကြီး စိုင်းဆိုင်မောဝ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းလောက်က ဘန်ကောက်မှာ ကျောက်ကပ်သွားခွဲခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
စိုင်းဆိုင်မောဝ်အနေနဲ့ ဆေးရုံမတက်ခင်ဆက်ကြားမှာလည်း ပရိသတ်များနဲ့ သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်က တစ်ဆင့်စကား တွေ အပြန်အလှန်ပြောဖြစ်နေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့နာမည်တူ အကောင့်အတုတွေ အများကြီးရှိတာကြောင့် သူသုံးနေတဲ့ အကောင့်ကနေ ပရိသတ်တွေမမှားရလေအောင် သတိပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
ယခုလက်ရှိမှာတော့ သူ့ရဲ့ ကျန်းမာရေး ပြန်လည်ကောင်းမွန်ဖို့အတွက် ပရိသတ်တွေက ဆုတောင်းပေးနေကြပါတယ်။တချိန်က ရှမ်းပဲပုတ် လေးကျွန်တော်၊ တောင်ပြာတန်းကသိတယ်၊မူဆယ်နန့်ခမ်းလမ်း အစရှိတဲ့သီချင်းတွေသာမက အောင်မြင် ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ အဆိုတော် စိုင်းဆိုင်မောဝ်ဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ ယခုထက်တိုင် နေရာယူထားနေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးကုသဖို့ သိနျးသုံးရာ ကူညီမှု ရရှိလိုကျတဲ့ စိုငျးဆိုငျမောဝျ
စငျကာပူနိုငျငံမှာရှိတဲ့ ဇနီးမောငျနှံက လှူခဲ့တာ ဖွဈပါတယျဆေးကုသမှု ခံယူနရေတဲ့ အဆိုတျောကွီး စိုငျးဆိုငျမောဝျအတှကျ ဆေးကုသဖို့ အတှကျ မွနျမာငှကေပျြ သိနျးသုံးရာ တိတိ ကူညီမှု ရရှိလိုကျတယျလို့ သိရပါတယျ။
ယငျးကူညီမှုကို စငျကာပူနိုငျငံမှာနထေိုငျတဲ့ ဦးကိုကိုထူးနဲ့ဇနီးဒျေါစန်ဒာအောငျတို့ မိသားစုကနေ လှူဒနျးခဲ့တာ ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ အဲ့ဒါအကွောငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး စိုငျးဆိုငျမောဝျရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျမှာ ယခုလို ရေးသားထားတာ တှရေ့ပါတယျ။
“စင်ျကာပူနိုငျငံနေ ဦးကိုကိုထူးနှငျ့ဇနီးဒျေါစန်ဒာအောငျသား မငျးသီဟထူးသမီး မဆုသီရိထူး မိသားစုတို့မှ တေးသံရှငျစိုငျးဆိုငျမောဝျ အားကမျြးမာရေးကုသရနျအတှကျ မွနျမာငှေ သိနျးသုံးရာကပျြကို ကိုကြျောကြျောမိုး ကိုမွတျသူတို့မှတဆငျ့ အိမျတိုငျရာ ရောကျလာရောကျ ကူညီပေးအပျသှားပါသညျ.ကြေးဇူးအထူးပငျတငျရှိပါကွောငျးနတျလူသာဓုချေါစသေောဝျ…ထိုငှမြေားကိုစိုငျးဆိုငျမောဝျ ကြောကျကပျရောဂါအား မှနျပွောငျးအသုံးပွုလဆောဖွငျ့ ကုသသညျ့နညျးဖွငျ့ အမွနျဆုံးကုသမညျဖွဈပါကွောငျး ပရိတျသတျမြားအား အသိပေးအပျပါသညျ. စိုငျးဆိုငျမောဝျမိသားစု” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာ တှရေ့ပါတယျ။
အဆိုတျောကွီး စိုငျးဆိုငျမောဝျဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးလောကျက ဘနျကောကျမှာ ကြောကျကပျသှားခှဲခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
စိုငျးဆိုငျမောဝျအနနေဲ့ ဆေးရုံမတကျခငျဆကျကွားမှာလညျး ပရိသတျမြားနဲ့ သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျအကောငျ့က တဈဆငျ့စကား တှေ အပွနျအလှနျပွောဖွဈနသေူလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူနဲ့နာမညျတူ အကောငျ့အတုတှေ အမြားကွီးရှိတာကွောငျ့ သူသုံးနတေဲ့ အကောငျ့ကနေ ပရိသတျတှမေမှားရလအေောငျ သတိပေးခဲ့ပါသေးတယျ။
ယခုလကျရှိမှာတော့ သူ့ရဲ့ ကနျြးမာရေး ပွနျလညျကောငျးမှနျဖို့အတှကျ ပရိသတျတှကေ ဆုတောငျးပေးနကွေပါတယျ။တခြိနျက ရှမျးပဲပုတျ လေးကြှနျတျော၊ တောငျပွာတနျးကသိတယျ၊မူဆယျနနျ့ခမျးလမျး အစရှိတဲ့သီခငျြးတှသောမက အောငျမွငျ ကြျောကွားခဲ့တဲ့ အဆိုတျော စိုငျးဆိုငျမောဝျဟာ ပရိသတျတှရေဲ့ ရငျထဲမှာ ယခုထကျတိုငျ နရောယူထားနသေူလညျး ဖွဈပါတယျ။